ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ သင့် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ? - The Lifestyle Myanmar
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ သင့် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ?
March 16, 2020 By life_admin Featured, Knowledge
ယခု အချိန် မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဟာနိုင်ငံတော်တော်များများကို ကူးစက်ပျံ့နှံနေပြီဖြစ်ကာ ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေဟာလည်း တော်တော်များများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင့်အနေနဲ့ ထိရောက်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်နာတတ်ဖို့ဟာလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။
အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေတော်တော်များများဟာ နည်းစနစ်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီတွေ့နေရမှာပါ။ ဒါဆို အသီးအနှံ့တွေက တကယ်ပဲ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်လား ။ ဗီတာမင် ဆေးပြားတွေဟာ အချိန်တိုအတွင်းသင့်ကို အားပြည့်လာစေသလားဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်…..
အကြမ်းမျဉ်းလေ့လာကြည့်ရင် လူတစ်ဦးချင်းဆီရဲ့ ကိုယ်ခံအားဆိုတာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲ ဆဲလ်တွေ တစ်ရှူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ…. အဲ့ဒီစနစ်ကို ထိန်းကျောင်းနေတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ သင်ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားတွေ၊ သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်၊ စားသောက်မှု ပုံစံနဲ့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကပဲ သင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင် သို့မဟုတ် ယုတ်လျော့စေပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးဟာ သင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် အရမ်းကြီးအထောက်အကူပြုမနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆို ဘာတွေက အဓိကကျနေတာလဲ???
၁။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားတွေကို လျော့ပါ
လက်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရောဂါအခြေအနေဟာ သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုပိုများစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုက်ရာ ဖျားနာခြင်းတွေတောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Carnegie Mellon University ရဲ့ နှစ် ၂၀ သုတေသန တစ်ခုအရ စိတ်ဖိစီးမှုများသူတွေဟာ အအေးမိခြင်းလို ရောဂါမျိုးတွေပိုဖြစ်တတ်တာ တွေ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် စုံတွဲတစ်တွဲကို လက်မှာ အနာတစ်ခုစီ ဖြစ်စေပြီး သာယာတဲ့ အချိန်တစ်ခုနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲစရာ အချိန်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းခိုင်းချိန်မှာ သာယာတဲ့အချိန်မှာ အနာရဲ့ သက်သာမှုနှုန်းဟာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒါဆို သင်ရော စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် စိတ်ညစ်စရာတွေ ကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ တရားထိုင်ပေးပါ။
သင့် ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ စနစ်တွေထဲမှာ ပြင်ပရောဂါကူးစပ်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့ စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်က သင့်မှာနေ့စဉ်လုံလောက်တဲ့ အိပ်ချိန်မရှိရင် အစွမ်းသိပ်မပြနိုင်ပါဘူး။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ လူပေါင်း ၁၆၄ ယောက်ကို အအေးမိစေတဲ့ ရောဂါပိုးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ တစ်နေ့အိပ်ချိန် ၆ နာရီထက်နည်းသူတွေဟာ ၇ နာရီအိပ်သူထက် ၄ ဆကျော်လောက် ရောဂါကူးစက်ခံရတာ ကိုတွေ့ရပြီး ၅ နာရီအောက်အိပ်သူတွေဆို ပြောဖို့တောင်လိုတော့မယ်မထင်ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ အိပ်ချိန် အိပ်ယာထချိန် မှန်ကန်ပါစေ။ အိပ်ခါနီး ဖုန်းသုံးတာ အစားအစာ စားသောက်တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန်လုပ်တာကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
၃။ သင့် ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲမှာ vitamin D လုံလောက်မှုရှိရဲ့လား???
vitamin D နဲ့ပတ်သတ်လို့ကတော့ ပညာရှင်တွေလေ့လာနေဆဲပါ။ သို့ပေမယ့် သက်ကြီး အယောက် ၁၀၀ ကျော်ကို ပုံမှန် vitamin D နဲ့ vitamin D ပိုမိုသောက်သုံးသူဟူပီး အုပ်စုနှစ်ခုခွဲလိုက်ချိန်မှာတော့ တစ်နှစ်ကြာချိန်မှာ ပိုမိုသောက်သုံးတဲ့ အုပ်စုဟာ အဖျားရောဂါ အအေးမိခြင်း ဖြစ်ပွားမှု တို့ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲက ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ကူးစပ်ရောဂါတွေကို တွန်းလှန်တဲ့ antimicrobial proteins ကို vitamin D ကတိုးပွားစေပါတယ်၊ ဒါကြောင့် vitamin D မှီဝဲဖို့ တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အရက်သောက်သုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ၊ မရှောင်နိုင်ရင်လျော့သောက်ပါ
အရက်သောက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း ဟာကိုယ်ခံအားကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်ခံစားစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ microorganisms တွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ စွဲပဲသောက်သောက် တစ်ခါတလေ အလွန်အကျွံသောက်တာဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည်သာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယခုလို ကာလမှာရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
တချို့ကပြောကြတယ် ။ ကြက်သွန်ဖြူပြုတ်သောက်တာတို့ ဂျင်းပြုတ်ရည်တို့ဟာ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတယ်ပေါ့။ သို့သော်လည်း တကယ်တမ်း ထိုအရာတွေဟာ ကြက်ပြုတ်ရည်နဲ့ အတူ တွဲဖက်သုံးဆောင်မှ အာဟရလည်းဖြစ် ဆေးဖက်လည်းဝင် အကျိုးလည်းပိုများတာပါလို့ လေ့လာသူအများစုက ဆိုပါတယ်။
သံဓာတ်ဟာလည်း ရောဂါကာကွယ်ရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။သို့ပေမယ် သင် ခန္ဓာ ကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်ပမာဏကို အရင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ သံဓာတ်ပမာဏများရင်လည်း အော့အန်တာတွေဖြစ်တတ်လို့ပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသည့် ပထမဆုံးလူနာ
ကိုရိုနာကပ်ရောဂါဘေး သက်သာစေရန် သီရိလင်္ကာဘုန်းတော်ကြီး အပါး ၅၀၀ ခန့် ပရိတ်ရွတ်